CASH POINT VOATAFIKA, VERY VOLA 07 TAPITRISA AR TENY 67 HA : Jiolahy 02 sarona, nadoboka eny Tsiafahy
Mihatratra ny mpitandro filaminana hatrany ankehitriny ireo andian-jiolahy nanatanteraka fanafihana « cash point » maromaro teto an-drenivohitra. Raha tsiahivina ny faha 30 janoary 2020 teo, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina dia nisy fanafihana mitam-piadiana nataona jiolahy maromaro tsy nisaron-tava nitranga teo amin’ny 67ha. 25 mars 2020
« Cash point 01 teny an-toerana moa no lasibatra ary vola mitentina 07 tapitrisa ariary niampy finday maromaro no very tamin’izany. Nitondra basy PA iray sy antsy lava ireo jiolahy tamin’io fandrobana io raha ny fanazavana voaray hatrany. Taorian’ity tranga ity moa dia nanokatra fanadihadiana ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP4 Isotry sy ny Sampan-draharahan’ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika faha-4 rehefa nahazo ny fitarainana maro.
Vokany, lehilahy miisa 02 teto no voasambotra teny Andavamamba, ny alakamisy 19 marsa 2020, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany antoandro. Rehefa nosavaina izy 02 lahy ireo tamin’io andro io dia nahatrarana antsy lava 01. Rehefa nosavaina ihany koa ny trano fonenan’izy 02 lahy ireto dia mbola hita tao ny akanjo nanaovan’ireto farany nandritra ny fanafihana nataony teny 67 ha.
Niaiky ny helony izy ireo nandritra ny fanadihadiana azy ary koa nanondro ny namany 01 hafa izay nolazain’izy ireo fa manana sy nampiasa ilay basy. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ity naman’izy ireo. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy izy 02 lahy ireto rehefa avy nandalo fampanoavana ny alatsinainy faha 23 marsa 2020 lasa teo.